Faah-faahin ka soo baxaysa khasaare ka dhashay dabkii Suuqa Banaadir iyo Tuugo soo weerartay (Warbixin) - Caasimada Online
Home Warar Faah-faahin ka soo baxaysa khasaare ka dhashay dabkii Suuqa Banaadir iyo Tuugo...
Faah-faahin ka soo baxaysa khasaare ka dhashay dabkii Suuqa Banaadir iyo Tuugo soo weerartay (Warbixin)
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa lagu guuleystay in la damiyo dab xalay ka kacay suuq ku yaalo isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho. dabka oo kacay abaaro sideedi fiidnimo ayaa soo gaaray ilaa saqdii dhaxe ee xaley.
Goobo ganacsi oo kala duwan ayuu dabkaasi xalay ka kacay suuqa isgoyska Banaadir baabi’iyay .
Xaawo Axmed Yuusuf oo suuqa gubtay ku lahayd Carwo ayaa warbaahinta u sheegtay in hantidii halkaasi u taalay ay wax yar uga badbaaday.
“Wax yar oo aan waxbo ahayn, dhar yar ayaan hadda meel geynay oo uga nimid, waana calalo yaryar oo meeshan hore yaallay gudaha lamaba galin waa bislaatay” ayey Tiri
Ganacasatada ay wax un u badbaadeen ayaa ka walwalsanaa intii uu dabka socday in laga dhaco alaabta maadama xili habeen ah ay ahayd.
Maryan jaamac Aadan waxay usoo gurmaday labo walaalaheed ah oo carwooyin uga gubteen suuqa waxa ay sheegtay in intii uu dabku socday ay tuugo rabtay in ay suuqa boobaan ay soo weerareen.
“Tuugo baangado, mindiyo iyo toorreeyo wadato ayaa nasoo weerartay, dadkii soo gali lahaa xitaa iyaga ayey ka soo gali waayeen, haddii aysan ahayn ciidanka dowladda dadka ayey naga dili lahaayeen” ayey tiri Maryan oo ay murugo ka muuqatay.